Tungsten Carbide Tallaabada Qoditaanka
Qodista iyo dabagalka
Ka daadgureynta jajab jilicsan
Birta tungsten ee la doorbiday
Sharf iyo wax ku ool ah
1. Biibiileyaasha waawayn ayaa si wax ku ool ah u hubin kara ka -qaadis qumman oo hagaagsan iyo hagaajinta hufnaanta mashiinka
2. Nano-dahaarka ku yaal geeska goynta, nano-dahaarka ayaa yareyn kara lumitaanka aaladda, aaladdu waa mid aad u adkaysi u leh, waxay yareysaa tirada isbeddelada aaladda sidoo kale waxay leedahay shaqada kuleylka kuleylka
3. Carbide sibidhka ah
Iyada oo la adeegsanayo walxaha saldhig birta tungsten-ga leh, waxay leedahay adkaansho sare iyo xoog foorarsasho oo wanaagsan, aaladdu waa mid aad u adkaysi u leh, ma fududa in la jabiyo oo la jebiyo, waxayna leedahay nolol adeeg dheer
4. Way fududahay in lagu shaqeeyo camfering
Qaab -dhismeedka shank ee qol -qubka ah ayaa si fudud loogu dhejin karaa.
Talooyin Ku Saabsan Daryeelka Tallaabada Qoditaanka
Haddii aad maareyn karto inaad si habboon u daryeesho aaladdaada, waxay u adeegi doontaa ujeeddada muddo dheer. Sidan, uma baahnid inaad lacag dheeraad ah ku iibsato xirmo cusub dhowaan. Hadda, ma aad bay u dhib badan tahay in si fiican loo daryeelo xirmada qoditaanka tallaabo tallaabo? Marnaba ma aha, waa sida ugu fudud ee ay noqon karto. Hadda, aan baranno sida saxda loo sameeyo.
Tallaabada 1: Waxaad u baahan tahay inaad si joogto ah u nadiifiso googoynta inta lagu jiro shaqada. Haddii kale, waxay u nuglaan doontaa inay waxyeello ka dhakhso badan sidii la filayay.
Tallaabada 2: Waa inaad xoogaa tirtirtaa marka shaqada la dhammeeyo.
Tallaabada 3: Ka xoq wixii jajab ah qashin -qubka adigoo isticmaalaya caday.
Tallaabada 4: Waxaad saliidda mashiinka u marin kartaa xabadaha kadib
Nooca gacanta Gacan toosan
Qalabka Shaqada Qalabka biraha sida birta, naxaasta, aluminiumka, birta daawaha, birta, iwm.
Function Daloollada godadka leh ee la qoday, qol -qol -jiifka
Dhexroorka Madaxa Yar (mm) 3.4-14.0
D1 (mm) D2 (mm) L (mm) L1 (mm) L2 (mm)
3.4 6.5 65 35 13
4.5 8.0 75 42 18
5.5 9.5 85 50 22
6.6 11.0 90 53 25
9.0 14.0 95 53 28
11.0 17.5 105 63 30
14.0 20.0 110 68 32
Hore: Alaab -qeybiye lagu kalsoonaan karo oo Dhibcaha Dhibcaha Qoditaanka - Carbide Coolant External Coolant Straight Shank Twist Bits - MSK
Xiga: V Groove Carbide Chamfer Drill Bits
waxoogaa qoditaan tallaabo cobalt ah
xoogaa talaabo ah
talaabo qoditaan bir ah
set daloolin tallaabo
kor u qaad qoditaanka
HRC55 qodista carbide ee Aluminium
Carbide Toos Qabashada Nooca Inner Coolant Dril ...
Carbide Qallajiska Drill Bits Ku habboon mashiinka ...
HRC55 Carbide NC Spotting Drills spot daloolin
5D Qaboojiyaha Carbide Solid-ku-quudinta Qabow-ku-quudinta